I-Patented ka-1952, iNtloko Ethengiswe Ngokwahlukileyo
Ngaba wayesazi ukuba uMongameli wePotato iNtloko wayelahlekile intloko? Imodeli yasekuqaleni ayizange ifike kunye namazambane aseburhulumenteni aseburhulumenteni.
UGeorge Lerner ucela uMnquli-ntloko ongenaNtloko
UGeorge Lerner waseSixeko saseNew York waqulunqa i-Potato Head ebizwa ngokuthi "yenza ubuso": Abantwana bafumana iqoqo leempahla zeplastiki njengombhobho ebhokisini lokutya , kwaye abazali babo babefanele banike iipatato-okanye nayiphi na enye into isiqhamo okanye imifuno ababebenayo-ukuyibeka.
Hasbro Buys kwaye uthumela iStrofoam uMnu. Potato Head
Ngo-1951 uLerner wathengisa ingubo yakhe yokudlala kwiHassenfeld Brothers, inkampani yaseThoven Island edlala itshoni eya kutshintsha igama layo ku-Hasbro, kwaye uMnu. Potato Head waya kwimveliso ngo-1952. Hasbro uthengisa kuqala uMnu. Potato Intloko ngentloko ye-styrofoam isiseko se-plug-ins yobuso. Nangona kunjalo, imiyalelo yabandakanywa ephakanyisiwe ukusetyenziswa kwemifuno neziqhamo esikhundleni se- styrofoam .
I-Ad yokuqala yeTV yabantwana
UMongameli wePotato yiyona nto yokudlala yokukhangisa kumabonwakude, kwaye isikhangiso sokuqala sijoliswe ngqo kubantwana. Iintengiso zisebenze: Idayi edayiswe ngaphezu kweeyunithi zezigidi ngonyaka walo wokuqala. UMnu. Potato Intloko wafika ngonyaka ozayo, kunye namanye amalungu omndeni athatyelwayo.
Umhla woMnu uMnu. Potato Head
Iipatato zeplastiki ezaziqhelekileyo zaqaliswa ngo-1964, emva kwemigaqo yokhuseleko karhulumente yanyanzela ukuba inkampani isebenzise izicucu ezincinci, ezingenakho ukubetha imifuno yangempela.
Oku kwakukho inzuzo eyongeziweyo yokungabi nciphisa ukutya, kwaye yabasindisa abazali ukuba bajongane nabantwana babo bedlala nemifuno ebolayo.
UMphathiswa wePotato uye waba yintsika yaseMerika kwiminyaka. Ngowe-1985, wathabatha ezine iivoti zokubhala kwi-electoral election in the hotbedbedbedbedbed of Boise, Idaho.
Kwakhona wayenendima yeenkwenkwezi kuzo zonke i-movie ze- Toy Story , apho wavakaliswa ngumdlali we-character Rickles uDkt. Namhlanje, Hasbro, Inc. usenza uMnu.
Funda Iimpendulo zesiJamani